Nay Nyo Chan: June 2016
Lesson-3 Appearance နဲ့ပက်သက်တဲ့ English collocations များ
My best friend Joanna is absolutely gorgeous (extremely beautiful).
ကျွန်တော့် အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း ဂျိုဟာနဟာ အရမ်းလှတယ်။
long, sleek, jet-black hair
She has long, sleek, jet-black hair (sleek = smooth and straight, jet-black = perfectly black), pale blue eyes (pale = light color), andaradiant complexion (skin that appears healthy and full of energy).
သူမမှာ ရှည်လျှားပြီး ဖြောင့်စဉ်းချောမွေ့ နက်မှောင်တဲ့ ဆံကေသာတွေရှိတယ်။ အပြာရောင်ဖျော့ဖျော့ မျက်လုံးတွေရှိတယ်။ စိုရွှန်းဝင်းပတဲ့ အသားအရေတွေ ရှိတယ်။
Posted by Nay Nyo Chan at 8:30 PM No comments:
ဒီတစ်ပတ်တော့ Lesson2Relationships ဆက်ဆံရေး နဲ့ပက်သက်တဲ့ English Collocations တွေ ဖော်ပြပေးပါမယ်။
ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှတ်သားရမယ့် အင်္ဂလိပ်စာ တွဲလုံးများ English collocations ကတော့
When you move toanew city, it can be hard to make friends. You’ll probably haveanumber of casual acquaintances – people who you know onabasic level, but with whom you don’t haveasignificant relationship.
မြို့သစ်တစ်ခုဆီ ပြောင်းရွေ့လာတဲ့အခါ မိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့ make friends ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ အခြေခံ အဆင့်လောက်သာ သိရပြီး ဆက်ဆံရေး အကျွမ်းတ၀င်သိပ်မရှိလှတဲ့ သာမာန်မိတ်ဆွေတွေ casual acquaintances ကတော့ အများကြီး ရှိကောင်း ရှိမှာပါ။
Posted by Nay Nyo Chan at 7:38 AM No comments:
Lesson - 1 - Family
Collocation ဆိုတာ မိတ်ဖက်တွဲလုံးပါ။ Collocations မိတ်ဖက်တွဲလုံးတွေ သိထားမယ် ရမယ်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာ အရေးသားပိုင်းရော အပြောပိုင်းမှာပါ အင်္ဂလိပ်တွေ ရေးသလို ပြောသလို ရေးနိုင် ပြောနိုင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိတ်ဖက်စကားတွေရထားခြင်းအားဖြင့် အရေး အပြောတွေမှာ ဝေေ၀ဆာဆာ လှလှပပ သွက်သွက်လက်လက် ပြောနိုင် ရေးနိုင်ပြီးတော့ ကိုယ်ပြောတဲ့ ရေးတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာတွေဟာ သဘာဝလည်းကျတဲ့ အရေးအသား အပြောအဆိုတွေဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါကြောင့်မို Collocations မိတ်ဖက်တွဲလုံးတွေကို လေ့လာထားစေချင်ပါတယ်။ မိတ်ဖက်တွဲလုံးတွေကို လေ့လာလို့ ရအောင် ဆရာမ Shayna Oliveira ရေးသားပို့ချတဲ့ 1000 collocations in 10 minutesaday ကို Learning English Collocations မှ ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ယခုထိ လေ့လာသင်ယူနေဆဲပါ။ ကိုယ်ရသလို အခြား အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတွေလည်း ရစေချင်တဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုတည်းပါ။ ဆရာလုပ်လို၍ မဟုတ်ကြောင်း ၀န်ခံ စကားပြောပါရစေ………
ပထမဦးဆုံး Lesson 1 အနေနဲ့ Family နဲ့ ပက်သတ်ပြီး အများစုဖော်ပြတဲ့ Collocations မိတ်ဖက်တွဲလုံးစကားလုံးတွေကို လေ့လာကြရအောင်ပါ။
Your parents and siblings (brothers and sisters) are your immediate family – and your extended family includes all your relatives – uncles, cousins, great-aunts, etc.
ခင်များရဲ့ မိဘတွေ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေဟာ ခင်များရဲ့ immediate family ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခင်များရဲ့ extended family ဆိုတာ ခင်များရဲ့ ဆွေမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ ဦးလေးတို့၊ ၀မ်းကွဲညီအစ်ကို မောင်နှစ်မတို့၊ ကြီးကြီးဒေါ်ဒေါ်တို့ ပါဝင်တဲ့ မိသားစု ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Nay Nyo Chan at 4:19 AM No comments:
Categories of Collocations
O’Dell and McCarthy (2008) explain seven different grammatical categories of collocations as follows:
1. Verb + noun: draw upalist/contract, pass upachance/opportunity, and withstand pressure/the impact.
2. Noun + verb: opportunity arise, and standards slip
3. Noun + noun:aspate of attacks/thefts,abarrage of questions/insults,astroke of luck, andasnippet of information.
4. Adjective + noun: idle threat, vain hope, mounting concern/criticism/ fury, and simple/plain truth.
5. Adverb + adjective: intensely personal, and stunningly attractive.
6. Verb + adverb or prepositional phrase: fail miserably, drive recklessly, burst into song, and foam at the mouth.
7. More complex collocations: take it easy forawhile, and put the past behind you.
Posted by Nay Nyo Chan at 3:23 AM No comments:
Collocation ဆိုတာ မိတ်ဖက်တွဲလုံးပါ။ Collocations မိတ်ဖက်တွဲလုံးတွေ သိထားမယ် ရမယ်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာ အရေးသားပိုင်းရော အပြောပိုင်းမှာပါ အင်္ဂလိပ်တွေ ရေးသလို ပြောသလို ရေးနိုင် ပြောနိုင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိတ်ဖက်စကားတွေရထားခြင်းအားဖြင့် အရေး အပြောတွေမှာ ဝေေ၀ဆာဆာ လှလှပပ သွက်သွက်လက်လက် ပြောနိုင် ရေးနိုင်ပြီးတော့ ကိုယ်ပြောတဲ့ ရေးတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာတွေဟာ သဘာဝလည်းကျတဲ့ အရေးအသား အပြောအဆိုတွေဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါကြောင့်မို Collocations မိတ်ဖက်တွဲလုံးတွေကို လေ့လာထားစေချင်ပါတယ်။
Posted by Nay Nyo Chan at 8:57 PM No comments: